लेडी बाइक स्टन्ट राइडर – mero sathi tv
On १३ मंसिर २०७४, बुधबार १६:२०
समयले यति छिटो फन्को मारिसकेको छ कि डेढ दशकअघिसम्म पनि केटी मान्छे घरबाट निस्कँदा ठूला आँखाले हेर्ने समाज अहिले उनीहरूप्रति गर्व गर्छ । युवतीहरूको पहिरन एवं चालढाल देखेर टीकाटिप्पणी गर्ने यो समाज कुनै समय बाइक लिएर निस्कने युवतीहरूप्रति नकारात्मक सोच राख्थ्यो तर अहिले त्यस्तो छैन, अहिले लेडी बाइक स्टन्ट राइडरहरूले समाज परिवर्तन भएको अनुभूति गरेका छन् । बाइक स्टन्ट खेल साहसिक खेलमध्ये एक हो ।
बाइकलाई वृत्ताकार शैलीमा फनफनी घुमाउनु, बेतोडले बत्तिइरहेको बाइकमाथि लम्पसार पर्नु, अगाडिको टायर हावामा उडाउनु आदि बाइक स्टन्टका केही उदाहरण हुन् । विदेशमा ५० औं वर्षदेखि लोकप्रिय यो खेल नेपालमा भने १० वर्षअघि मात्र प्रारम्भ भएको हो । खेलकुद परिषद्अन्तर्गत एड्भेन्चर स्पोर्टस्का रूपमा खेलिने यो खेललाई जोखिम र साहसको मिश्रण मानिन्छ । यसमा युवतीहरू पनि सक्रिय छन् ।
खेलकुद परिषद्मा सन् २००८ मा रजिस्टर गरिएको यो साहसिक खेल दर्ता हुनुअघिदेखि नै खेल्न थालिएको हो । सन् २०११ मा दीपेश श्रेष्ठले राइडर युनिफाइ दर्ता गरी विधिवत् रूपमा बाइक स्टन्ट सिकाइरहेका छन् । त्यही वर्षदेखि नै नेपालको बाइक स्टन्टमा महिला खेलाडीको उपस्थिति देखिएको हो । सुवानी थापा नेपालकै प्रथम लेडी स्टन्ट राइडर हुन् । उनी फोटोग्राफीकी सौखिन थिइन् । चोभारको मलपोखरीमा बाइक स्टन्ट सञ्चालन भैरहेको जानकारी पाएर सुभानी क्यामेरा बोकेर त्यहाँ पुगेकी थिइन् । आश्चर्यजनक ढंगले गरिएको स्टन्टले उनको ध्यान खिच्यो । शुभानीलाई निकै रमाइलो लाग्यो र एकपटक आफूलाई पनि प्रयास गर्न मन लागेको कुरा सुनाएपछि दीपेशले गर्न सक्छ्यौ गर न भनेर प्रोत्साहित गरे र सुभानीले क्यामेरा छाडेर बाइकको हेन्डिल समातिन् ।
एकैपटकमा उनले ल्यान्डस्केप स्टन्ट फलो गरेर देखाइदिइन् । बाइकको एक साइडमा उभिएर देखाइने स्टन्ट हो, ल्यान्डस्केप । यसका लागि राइडर र बाइकको सन्तुलन मिल्नुपर्छ । ल्यान्डस्केप स्टन्ट गर्न निरन्तर अभ्यास आवश्यक हुन्थ्यो तर शुभानीका निम्ति एउटै प्रयास पर्याप्त भयो । त्यसपछि शुभानी बाइक स्टन्टमा थप आकर्षित भइन् । सुभानीले स्टन्टको आधारभूत कला सिकिन् र दरबारमार्गमा आयोजित ‘डान्स पार्टी विथ स्टन्ट शो’ मा प्रस्तुत भइन् । नेपालमै पहिलो पटक लेडी स्टन्ट राइडरको प्रस्तुतिलाई दर्शकहरूले रुचिपूर्वक हेरे । शुभानीले बाइक स्टन्ट गरेको देखेर धेरै युवती यसप्रति आकर्षित भए । यो खेलमा फेसियल एक्सप्रेसन, मुस्कान एवं आत्मविश्वासको समेत ठूलो भूमिका हुन्छ । आत्तिने, डराउने मानिसहरूले यो खेल खेल्न सक्दैनन् । ल्यान्डस्केपका अतिरिक्त स्केप, कम्पास, साइट स्केचबाहेक वर्न आउट र लेजे वोयजस्ता स्टन्टमा अहिले नेपाली महिला राइडरहरू पोख्त भैसकेका छन्।
इन्जिनको शक्ति र ब्रेकको सन्तुलनमा पछाडिको टायरलाई धूवाँको मुस्लो निस्कने गरी घुमाउनुलाई वर्न आउट भनिन्छ । यस्तै लेजे वोयअन्तर्गत बेतोडले बत्तिइरहेको बाइकमा लम्पसार परेर सुत्ने कला देखाइन्छ । बाइकलाई वृत्ताकार घुमाउनुलाई ‘ह्युमन कम्पास’ भनिन्छ । साइड स्केचमा एक छेउमा बसेर बाइकलाई फनफनी घुमाइन्छ । त्यसबाहेक ह्विली, हाइ चेयर, सिट डाउन ह्विली, ट्वेल्भ ओक्लक, वर्न आउट, स्टपी, लेजे वोय, फेन्डर ड्रगजस्ता स्टन्टमा युवतीहरूले आफूलाई अभ्यस्त बनाउँदै लगेका छन् ।
बाइक स्टन्ट आफैमा जोखिमपूर्ण खेल भए पनि यो असुरक्षित भने नभएको दीपेश श्रेष्ठ बताउँछन् । श्रेष्ठ भन्छन्–‘नियमपूर्वक गर्ने हो भने अरु खेलजस्तै सामान्य नै छ तर जथाभावी खेल अभ्यास गर्नाले चोटपटक लाग्ने भय हुन्छ । यस किसिमका स्टन्ट गर्न कठिन अभ्यास, आत्मविश्वास र साहस चाहिन्छ । शारीरिक लचकता, तन्दुरुस्ती अनि एकाग्रता त हुनैपर्छ । डर र टेन्सनमा यो खेल खेल्नु भनेको दुर्घटना निम्त्याउनु हो ।’ युवाहरूको क्रेज रहेको यस्तो खेलले स्वत: लैङ्गिक विभेदका विरुद्धमा अभियान छेड्ने मेरिनाको मान्यता छ ।
नेपालमा महिनाका ४–५ वटा जति रोड शो, इभेन्ट, महोत्सव आदि भैरहेका हुन्छन् । साथमा अहिले चलचित्र तथा म्युजिक भिडियोहरूमा पनि बाइक स्टन्टहरू राख्ने चलनले युवतीहरूमाझ यसको लोकप्रियता अझ वृद्धि भएको छ । अहिले बाइक स्टन्टमा रेस नारी, रेसमाण्डु, जिम खाना आदि प्रतियोगिताहरू आयोजित हुन्छन् । इन्टरनेसनल फिमेल राइड डेमा नेपालमा पहिलो पटक कार्यक्रम आयोजित गरिएको थियो । काठमाडौंबाहेक धरान, इटहरी, बुटवल, पाल्पा, पोखरा, झापा, धुलिखेल तथा तनहुँका युवतीहरूसमेत बाइक स्टन्टमा सक्रिय छन् । अहिलेसम्म ५० जनाजति युवतीले बाइक स्टन्ट सिके पनि यसलाई निरन्तरता दिने २० जना मात्र छन् ।
कमाउन पनि सकिन्छ : १. बाइक प्रमोसन २. बाइक टेस्ट राइड ३. राइजिङको प्रशिक्षण ४. बाइक विज्ञापन ५.रोड शो ५. इभेन्ट आदिबाट ।
साउदी गएको १२ दिनमै रोल्पाका दुई युवा पक्राउ, उद्धार गरिदिन परिवारको आग्रह
आफूहरुलाई जोकर भनेपछि जीतुको रेखालाई जवाफ, ‘जोकरमै पैसा बर्सिएको छ !’ (भिडियो)